I-Semalt ichaza isizathu sokuba kubalulekile ukukhupha idilesi ye-IP kwi-Akhawunti ye-Google Analytics
Xa i-akhawunti yeGoogle Analytics isetyenziswe, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba isayithi ayingcoliswe ngedatha eqhoshayo, enokuxhomekeka kwiintengiso zewebhu. Olu tyelelo lungabandakanyeka lakho okanye ngaba baqeshwa bakho ukuba kukho na. Ngoko ke, kubalulekile ukukhuphela zonke idilesi ze-IP ezingenakufunwa ukukhusela idatha ekuboniseni kwi-akhawunti ye-Google Analytics. Ukuvalwa kwezi tyelelo kungenziwa ngokutyelela imenyu ye-Admin nokuhlela ukhetho lweeMifanekiso.
U-Oliver King, u-10 (Semalt) uMphathi weNtuthuko yabaThengi, kubalulekile ukuba kuqakatheke ukuba uqaphele ukuba zonke iikhomputha ezisebenzisa i-Wi-Fi efanayo zinayo idilesi ye-IP efanayo kwaye kufuneka, ke, ingabandakanywa ukuba loo datha akufuneki ukuba kuboniswe kwi-akhawunti ye-Google Analytics. Idilesi ye-IP ingaqatshelwa ngokutyelela le ndawo: https://www - tappeti bambini bonprix katalog.whatsmyip.org/; zonke iidilesi ze-IP ezifuneka ukukhutshwa zingabonwa ngokusebenzisa ikhonkco efanayo. Ukuba ikhonkco isetyenziselwa ngokufanelekileyo iziphumo zibonisa idilesi ye-IP, igama lomninimzi kunye ne-arhente yomsebenzisi. Kunokwenzeka ukuba ufumane enye inkcukacha kwinethiwekhi yakho kulekhonkco. Olunye ulwazi olunokufumaneka kwikhonkco lubandakanya:
WHOIS kunye ne-DNS
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukuba i-Wi-Fi inqanyuliwe, ke iilesi ze-IP ezahlukileyo ziya kuveliswa ngokusebenzisa ikhonkco elifanayo. Idilesi ye-IP inokufumaneka kwakhona kwiifowuni kunye neepilisi, ezisetyenziselwa ukuba zifikelele kwi-intanethi ukuba zingasebenzisi i-Wi-Fi.
Indlela yokukhupha idilesi ye-IP kwi-Google Analytics?
Into yokuqala kukungena kwiakhawunti ye-Google Analytics.
Emva kokungena kwi-akhawunti ye-Google Analytics kufuneka ukhethe iphrofayili.
Emva kokuba iphrofayili ikhethiwe, kufuneka ukhethe imenyu ye-Admin.
Kwimenyu ye-Admin, Ikhetho le-All Filters kufuneka likhethwe phantsi kwekhetho le-Akhawunti.
Ngaphantsi kwayo yonke Imenyu yokuhlunga, isinyathelo esilandelayo kukucofa kwiKhentshi yeFayile yoKongeza.
Ifayile kufuneka ifakwe igama. Igama leFayile lingaba yiliphi igama lokuzikhethela.
Uluhlu lwefayili kufuneka luhlale njengoko lucacisiwe.
Uluhlu lwefayili kufuneka lubonise "Hlanganisa + ithrafikhi kwiidilesi ze-IP + ezilinganayo".
Faka idilesi ye-IP evela kwikhonkco ekhankanywe ngasentla.
Emva kokuba inkqubo echazwe ngasentla ilandelwe, idatha yangaphambili yangaphambili iya kuhlala ishintshwe yidilesi ye-IP. Nangona kunjalo, ukuba inkqubo iya kulandelwa ekugqibeleni, ke idatha ayiyi kungeniswa ukusuka kuloo ndawo ukuya phambili. Oku kuya kuqinisekisa ukuba idatha yokunika ingxelo ayiyi kuchatshazelwa kwedatha ebalulekileyo, ekhokelela kubalo bobuxoki. Xa ukutyelelwa okungafunekiyo kungabandakanywa kwi-akhawunti ye-Google Analytics, idilesi ekhoyo enokuthi ifumaneke ingasetyenziselwa ukuphucula nokuthengiswa ngcono kwewebhusayithi.